Margarekha प्रधानमन्त्रीमा ओलीजीको सम्भावना बढी’ प्रचण्ड – Margarekha
प्रधानमन्त्रीमा ओलीजीको सम्भावना बढी’ प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा चितवन ३ बाट सोमबार निर्वाचित भए। उनले आसन्न वाम गठबन्धनको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने दाबी गर्दै अधिनायकवादको हौवाबाट नझस्कन अपिल पनि गरे।
त्यस्तो लाग्दैन। ती मुद्दा स्थापित गर्नुभन्दा पहिला नै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ भन्ने मलाई त्यतिबेलै लागेको थियो। शान्ति–सम्झौताकै बेला एमाले–माओवादी एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनिएको थियो। दोस्रो कुरा, माओवादीले उठाएका मुद्दा त स्थापित भइ नै सके। हामीले युद्धमा उठाएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता त राष्ट्रका मुद्दा भइ नै सके। मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। संविधान बनाउँदा ती सबै मुद्दा मुख्यतः माओवादीका हुन्। त्यसकारण मलाई एमालेले जित्दा पनि माओवादीले जितेजस्तो लाग्छ, कांग्रेसले जित्दा पनि माओवादीले जितेजस्तो लाग्छ भनेर धेरैचोटि भनेको छु। त्यो भन्नुका पछाडि गम्भीर अर्थ छ। किनभने हिजो यी मुद्दामा सबैको समर्थन त थिएन नि ! हामी एक्लै लड्नुपरेको थियो। अहिले त जसले जिते पनि गर्ने काम त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लागि हो। अब फर्केर कोही राजतन्त्रमा जाने त छैनन्। कोही धर्म सापेक्षतामा जाने पनि छैनन्। कोही अब महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबाट पछि हट्न सक्छ त ? हामी दलित महिला भनेर लड्यौँ। अहिले एमाले आउँदा पनि महिला नै आउँछन्। कांग्रेस आउँदा पनि महिला नै आउँछन्। मलाई गर्व छ कि यो हाम्रो लडाइँको महान् जित हो। सबै अधिकार सम्पन्न हुनेतिर गयो। मैले त्यसरी हेर्दिनँ जसरी मानिसले हेर्छन्। मेरो हेराइ कस्तो छ भने जसले जिते पनि क्रान्तिले जित्यो, परिवर्तनले जित्यो, न्यायले जित्यो। उत्पीडनका विरुद्ध संघर्षले जित्यो भन्ने लाग्छ।
यसमा ठूलो समस्या छैन। केपीजी र म बसेर को हुने भनेर छलफल त भएको छैन। तर, पार्टी एकता संयोजन समितिमा दुईवटै पार्टीका अध्यक्ष रहेकाले दुइटैको कार्यकारी भूमिका हुनेमा कुनै शंका छैन। तर, अहिले संख्याको हिसाबले पनि सबै हिसाबले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्छन्। मलाई त्यस्तो कुनै आपत्ति हुने कुरा पनि छैन। तैपनि यो विषय जसरी बाहिर अलि चर्कै पर्छ कि भन्ने चर्चा चलेको देख्छु, यो हाम्रो दृष्टिमा अहिले भर्खरै जटिल विषय हुनेवाला छैन। हामीले यो विषयलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पनि, भावनात्मक हिसाबले पनि हल गरिसकेको विषय हो। औपचारिक निर्णय नहुँदै बोल्न मलाई थोरै अप्ठ्यारो भएको हो।
–सम्भावना ओलीको देखियो होइन ?
निजी क्षेत्र सशंकित हुनुपर्ने कुनै आधार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरीकन आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरामा वामपन्थी गैरवामपन्थी सबै सहमत नै छन्। दोस्रो कुरा, तपाइँले हेर्नुभयो भने वामपन्थीको नेतृत्वको सरकार भएको बेला सबैभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएका छन्। मेरो नेतृत्वको सरकार हुँदाकै कुरा गर्ने हो भने पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरू भएका छन्। निजी क्षेत्रका संघसंस्था छन् जस्तोः उद्योग वाणिज्य महासंघ। उहाँहरूका आवश्यकता तुरुन्तातुरुन्तै क्याबिनेटबाट पास गरेर पूर्ति गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। उनीहरूले हामीलाई त बरु माओवादीसँग काम गर्दा पो सजिलो भयो, निजी क्षेत्रका काम फटाफट अगाडि बढे भन्ने प्रतिक्रिया दिए। कम्युनिस्टहरूले निजी क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउँछन् भनेको त झन् बढी उदारतापूर्वक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम वामपन्थीले गरे भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकरीले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिपय प्रतिनिधिहरूसँग भनेको सुनिएको छ।अन्नपुर्ण पोष्ट् बाट
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:०२ प्रकाशित